Kolikoly, tsy fanajana ny zon’olombelona: tafakatra 59 ireo zandary naiditra am-ponja | NewsMada
Mifonja avy hatrany ireo zandary minia mandika lalàna mandritra ny asany. Hentitra amin’ny fanajana ny lalàna ireo tompon’andraikitra, ary mbola nanamafy izany, omaly. Efa maromaro ireo zandary any am-ponja, vokatr’izany.
“Hanaovana fanadihadiana ary handraisana fepetra ireo zandary minia tsy manara-dalàna sy tsy manaja ny zon’olombelona ary manao fihetsika mamoafady”, hoy ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, omaly, nandritra ny valandresaka nataon’izy ireo teny amin’ny Toby Ratsimandrava. Fantatra fa tafakatra 59 ny isan’ireo zandary naiditra am-ponja noho ny raharaha maro samihafa toy ny resaka kolikoly, ny tsy fanajana zon’olombelona ary ny fandikan-dalàna. Manoloana ireo fihetsika ireo, tsy handefitra velively amin’ireo zandary am-perinasa manao izany fomba ratsy izany ny Zandarimariam-pirenena. “Tsy hiray tsikombakomba amin’ireo manao fandikan-dalàna ihany koa izahay ary tsy misy olona ambonin’ny lalàna eto. Rehefa manao ny tsy mety, iharan’ny lalàna”, hoy ilay manamboninahitra raha nanazava ny amin’ny fihoaram-pefy sy fanararaotam-pahefana ataon’ireo zandary am-perinasa. Fantatra tamin’ny angom-baovao fa efatra ny zandary efa misazy momba ireo fomba ratsy ireo raha tsy hilaza afa-tsy ny amin’ny fikasihan-tanana ataon’izy ireo amin’ny olon-tsotra, ny firaisana tsikombakomba amin’ny jiolahy ary ny tsy fanajana zon’olombelona. Isan’ireo toerana nahitana izany tranga izany, rah any nambarany, ny tao amin’ny faritra Mahajanga, ny tao Ambatofinandrahana ary tao Betroka. Nohamafisiny tamin’izany fa hatolotra ny fitsarana ary hoenjehina ireo mandika lalàna mifehy ny fifehezan-ena amin’ny maha zandary azy. Araka ny fantatra, nitaraina ny masoivoho iray eto an-toerana mahakasika ny fihetsika nataona zandary am-perinasa. Manamafy, araka izany, ny Zandarimariam-pirenena mahakasika ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny asa ataon’izy ireo. Nohamafisiny fa raha misy fandikan-dalàna ataon’ny zandary, hisokatra avy hatrany ny fanadihadiana rehetra ary hifonja avy hatrany izy raha voaporofo izany.
Raha tsiahivina, vao tsy ela akory izay, nanao fanambarana mahakasika ny fihetsika mety ho fihoaram-pefy ataon’ireo zandary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, nanamafisany fa tsy ho fialokalofan’ny jiolahy ny zandary. Hentitra ary tsy hanaiky ny fihetsika toy izany ny Zandarimariam-pirenena. Fantatra ihany koa fa tsy vao voalohany ny nitondran’izy ireo fanamarihana mahakasika izany tao anatin’izay telo volana izay. Mipetraka ankehitriny ny fanontaniana hoe misy tsy fahatomobanana tanteraka ve ao amin’ny zandarimaria sa misy zavatra tiana hasongadina?